HomeAfaan OromooOdeessa keessoo ODP tii dhufe!!
“Qaamni amma koree qindeessituu Mootummaa Oromiyaa jedhamee aangoon ol’aanaan kennameef Addisuu Araggaa, Shimallis Abdiisaa, Awwal Abdii, Kaasahun Gofee ti. Jara kanatu Oromiyaa akka barbaadanitti naannessaa jira. Dhimma siyaasaa, muudama, nageenyas tahee waan fedhan isaanuma kanatu murteessa. Kaabineen ofumaaf malee aangoo hin qabdu. Kan caalaa nama gaddisiisu ammoo, duuti ilmaan Oromoo namoota kanatti hin dhagahamu. Dantaa ofiisaanii qofa ari’u. Hundinuu fakkeessituu fi sobduudha. Abiyyiin jala gugguufuu malee rakkoo Oromoof fala kaa’uu fi of fakkaatanii yaaduu hin danda’anu yookiis hin fedhanu. Jarro kun osoo sirni nafxenyaa nutti deebi’ee warra amin jedhee fudhatudha. Abbaan dhufe moohu ergamuufiif duubatti warra jedhuu miti. Hidhaa amma Oromiyaa keessatti raawwataa jiruuf, dhoorgii alaabaa Oromoo irratti godhamaa jiru, akkasumas Oromummaa dadhabsiisuun walqabatee tarree duraa irratti gaafatamoo dha. Lammaa fi Xayyibaa irrattis kan ijaaramee kuffise warruma kana. Abiyyiinis guyyaa guyyaan dogoggorsiisaa oolu.”
(via Dábessá Gemelal) — Kun yakkammaa ODPn bobaa jalatti baattee jirti. Yeroo darbe, nama Agaazii fuudhee Qeerrootti geessee Asaasaatti akka umnmatni dhumu kan godhee. Gochaa sanaanummanni keenya hedduun miidhameera.
Awwal Abdii jgocha badaa dalage sanaaf gaafatamuu otuu qabuu, amma aangoo badhaafame. Yakka dalage sanaaf seeraan gaafatamuun hafeet, aangoon dabalameefi yeroo ammaa waajjira ODP jiddugaleessatti itti gaafatamaa ijaarsa magalaa ti. Jechuun itti aanaa Addisu Arega Kitessaati. Erga aangoon dabalameefii warra isa waliin ummata ficcisiisaa ture aangotti deebisee miidhamtoota doorsisaafi hiraarsaa jira.
Alaabaa kanaa fi ayyaana Oromoon ayyaaneffatu adda baasuuf yaaluun gonkumaa hin danda’amu. Alaabaan kun alaabaa ummataa ti. ABOn qabsoo waggaa 40 dura gad dhaabe alaabaa kanaan asxesseetu ummatatti dabarse. Qabsoo ummatatti dabre sanatu jijjiirama kana fide. Kanaafuu alaabaan kun akka har’a dhaabni ABO qoqqoodametti ulfina dhorkamee salphifamee laalamuu gonkumaa hin danda’u. Alaabaan kun irbuu gootota kumoota Oromoo dukkana keessaa baaasuuf kufaniiti. Warra lubbuun jirruufis irbuu keenya. Gaafa jalqaba qabsoof gad baanu alaabaa kanaan kakanne. Hanga lubbuun jirruttis kakuu alaabaa kana qabannee kakanneef amanamuun falmaa itti jirru fufna.
Alaabaan kun asxaa paartii siyaasaa jedhamee masaanomfamuu hin qabu. Alaabaa tokko itti abboomee kaan lagachuu danda’us miti. Warri sabboonummaa himachaa alaabaa kana waliin lola qabdan yoo jiraattan araaramaa. Alaabaa kana ulfeessuuf dirqamatti alaabaa masaanuu waliin morka seenuus nun barbaachisu. Eenyummaan ofii morkaan jiraatee morkaan hin dhabamu. Umama waan taheef hanga abbaan jirutti waliin jiraata. Alaabaan kunis Oromoodhaaf akkasuma. Kanaafuu ayyaana Irreechaas tahee ayyaana Oromoo kamuu irrattuu qaamni alaabaa kana dhorkuu kajeelu yoo jiraate of dararuu haa dhaabu.
VOA Afaan Oromoo: Gammachuu Gaaromsaa Miliquu Yaallaan Dhukaasa Itti Banameen Lubbuun Isaa Darbe: Qaamni Mootummaa
Akkaa OPDO lubbuu namaati baachuu dhageeffadha. Pathological liar of the OPDO cadre.